Harry Kane oo rikoor cusub u dhigay Horyaalka Ingiriiska - BBC News Somali
Image caption Harry Kane oo la dabaaldegaya ciyaartoyda kooxda Tottenham
Kane ayaa goolashaasi waxa ay ka caawiyeen inuu jabiyo rikoorka goolasha ugu badan ee uu ciyaaryahan sanad gudahii ka dhaliyo Horyaalka Ingiriiska.
Ciyaaryahanka ayaa markii ay ciyaartu bilaabanaysay ayaa waxa uu u baahnaa hal gool oo kaliya si uu rikoor cusub u dhigo una jabiyo rikoorkii uu 1995 uu horay u dhigay laacibkii hore ee kooxaha Blackburn iyo xulka Ingiriiska ee Alan Shearer.
Weeraryahan Harry Kane ayaa sanadkan 2017 wuxuu dhaliyey 39 gool, taas oo ka dhigaysa in sanadkan sii dhamaanay uu xulkiisa qaranka ee Ingiriiska iyo kooxda Tottenham uu u dhaliyey 56 gool, waxaana uu laba gool ka badan yahay goolasha Lionel Messi sanadkan uu u dhaliyey kooxda Barcelona iyo xulkiisa Argentina.
Harry Kane waxa uu 39 gool ku dhaliyey 36 kulan oo Horyaalka Ingiriiska uu sanadkan u saftay kooxdiisa, halka Shearer ay ku qaadatay in 42 kulan uu ku dhaliyo 36 gool ee uu rikoorku ku sameeyay.
Saddexleyda maanta uu dhaliyey Harry Kane waxay kaloo ka dhigan tahay in uu Premier League-ga ka dhaliyey sideed mar, waxaana uu la siman yahay laacibintii Thierry Henry, Michael Owen, waxaase ka badan labada ciyaartoy ee kala ah Alan Shearer oo dhaliyey 11 saddexley iyo Robbie Fowler oo 9 mar isaguna dhaliyey, sanado badan ayuuse sii dheeli karaa Harry Kane.